Airtel Madagascar: tohanana i Do B hanampiana ny ONG Manda | NewsMada
Airtel Madagascar: tohanana i Do B hanampiana ny ONG Manda
Manakalaza ny fahadimy taony izao i Do B mpanao feon-kira am-bava (Beat –box), koa haneho fampisehoana izy ao amin’ny CGM Analakely, ny asabaotsy 17 novambra ho avy izao. Tsy misy vidim-pidirana fa manohana azy ny Airtel Madagascar, hanangonana tolotra na rakitra, amin’io fotoana io, ho fanampiana ny ONG Manda.
Misy vahiny hiaraka amin’ny Do B ahitana mpandihy, mpitendry valiha, rappeurs. « Atao ny hampiraisana ny mahasoa sy ny mahafinaritra. Tsy hoe ho fampisehoana izany Beat –box izany fotsiny no atao, fa fandraisana anjara ho fanampiana ireo ankizy sahirana karakarain’ny ONG Manda », hoy ny mpanakanto Do B.
Mampiseho ny fanohanana fanomezan-danja ny tanora malagasy manatalenta izao, araka ny fanamarihan’ny Airtel Madagascar. Manakaiky hatrany sy mihaino ny rehetra ity orinasa amin’ny sehatry ny serasera ity. Tanora mpanakanto teo amin’ny Hip-Hop i Do B. Manatalenta manokana izy momba ny “Beat –box”, na fanaovana feon-kira am-bava.
Iza kosa ny ONG Manda ? Niforona hatramin’ny 1999, manampy ny ankizy avy amin’ny fianakaviana sahirana eto Antananarivo. 300 isan-taona ny ankizy karakarain’ny ONG Manda, manana ny foibeny eny Tsiadana. Manabe sy mampianatra, hatrany amin’ny fahasalamana. Misy amin’ireo ankizy mody any amin’ny fianakaviany ihany, ao ireo tanora mijanona kilasimandry, mianatra asa.
“Misy amin’ireo ankizy nobeazin’ny ONG Manda ireo, tafita ankehitriny. Isan-taona misy afa-panadinana CEPE sy BEPC ary misy tonga any amin’ny ambaratonga ambony”, hoy Rasoanirina Jeanne, miasa ao amin’ny ONG Manda. Tsy mbola nahazo fanampiana avy amin’ny fanjakana ity ONG ity. Ny “Fikambanana zazafaly” any Alemaina no manampy azy ireo sy ny hafa, ary izao tohanan’ny Airtel Madagascar amin’ny alalan’ny hetsika ataon’i Do B izao. Antenaina fa hitohy ny fiaraha-miasa.